भोलि पपुवा न्युगिनी बिरुद्ध हारे के हुन्छ जिते के हुन्छ ? जानीराखौं |
भोलि पपुवा न्युगिनी बिरुद्ध हारे के हुन्छ जिते के हुन्छ ? जानीराखौं
२०७४, ३० फाल्गुन बुधबार १२:१४ March 14, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौँ । आसीसी विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको नेपालको ध्यान अब एकदिवसीय मान्यता पाउनेमा रहेको छ । नेपाली क्रिकेट सम्बन्धि पल पलको खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम भिजिट गर्नु होला ।
यो पनि पढ्नुस् : स्टार क्रिकेटहरुलाई पछि पार्दै नेपाली कप्तान पारस खड्का ११ स्टार खेलाडीको सूचीमा
विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा हङकङलाई पराजित गरेर नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाउने सम्भावनालाई जिवितै राखेको हो । अब नेपालले प्ले अफ खेल खेल्दै एकदिवसीय मान्यता पाउने कोशिश गर्ने छ । एकदिवसीय मान्यता पाउने दौडमा नेपालसहित हङकङ र पिएनजी रहेका छन् ।
नेपालले प्ले अफमा पपुवा न्युगिनीसँग बिहीबार खेल्दै छ । नेपालले विहिबार पिएनजीलाई पराजित गरेमा एकदिवसीय मान्यता पाउन एक कदम अगाडी बढ्ने छ । तर अर्को प्ले अफ खेलमा नेदरल्याण्डले हङकङलाई पराजित गरेमा भने नेपालले पिएनजीलाई जितेमा मात्र पनि एकदिवसीय मान्यता पाउछ । नेपाली क्रिकेट सम्बन्धि पल पलको खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम भिजिट गर्नु होला ।
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन बनेको नेदरल्याण्डले २०२२ सम्मका लागि एकदिवसीय मान्यता पाईसकेकोले नेपालले पिएनजीलाई हराउने र नेदरल्याण्डले हङकङलाई हराएको स्थितिमा नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाउने छ । त्यस्तै पिएनजीले एक दिवसीय मान्यता पाउने अवस्था पनि नेपालको जस्तै रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुस् : यसकारण दिए रोहितलाई अफगानिस्तानका कप्तानले ब्याट उपहार
तर नेदरल्याण्ड हङकङसँग पराजित भएमा भने नेपालले पीएनजीलाई जितेर मात्र पुग्दैन । फेरी नेपाल र हङकङबीच अर्को खेल हुने छ र सो खेलको विजेताले मात्र एक दिवसीय मान्यता पाउने छ ।
एशोसियट्स देशहरुबाट विश्वकप छनौटको सुपर सिक्समा पुग्दै स्कटल्यान्ड र यूएईले यसअघिनै एकदिवसीय मान्यता पाइसकेका छन् । नेपालले विहिबार अपराह्न सवा एक बजे प्ले अफ अन्तर्गत पिएनजीसँग जिम्बाबेको हरारेमा हुने छ ।
यसैबिच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली हरारे पुगेको छ। जिम्बावेको बुलावायोमा समूह चरणका खेलपछि नेपाली टोली मंगलवार हरारे पुगेको जिम्बावेबाट प्रशिक्षक जगत टमाटाले बताए। नेपालले समूह चरणका चार खेल बुलावायोस्थित क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब र बुलावायो एथ्लेटिक क्लबमा खेलेको थियो।
अब नेपालले प्ले अफ खेल हरारेस्थित ओल्ड हरारियन्स स्पोर्ट्स क्बलमा खेल्नेछ। नेपाल र पपुवा न्यू गिनी बीच क्रस प्लेअफ बिहीवार हुँदैछ। उक्त खेलमा विजयी भए सातौँ स्थानका लागि प्ले अफ खेल क्वेक्वेमा हुनेछ। पराजित भए नवौं स्थानका लागि ओल्ड हरारियन्स क्लबमै खेल हुनेछ। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धि पल पलको खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम भिजिट गर्नु होला ।
यो पनि पढ्नुस् : भारतीय क्रिकेटर मोहमद शमीलाई १० वर्ष जेल हुनसक्ने
प्रशिक्षक टमाटाले अब अगाडि बढ्नका लागि राम्रो क्रिकेट खेल्नुपर्ने बताए।जिम्बावे जानुअघि प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली खेलाडीलाई बिदाई गर्दै ‘हरारेमा ठूला मान्छे देखेर डराउनुपर्दैन, राम्रो खेलेर, जितेर आउनुस्’ भनेका थिए। नेपालले सुरुको ४ खेल हरारेमा खेल्न नपाए पनि अबका महत्वपूर्ण खेल भने खेल्दैछ।
पपुआ न्यू गिनी : असदोलह वाला (कप्तान), चार्ल्स अमिनी, सेसे बाउ, महूरू दई, किप्लिन डोरीगा, जेसन किला, वणी मोरिया, आली नाओ, डेमियन राव, जॉन रेवा, लेगा सिका, चाड सोपर, टोनी उरा, नॉर्मन वानुआ और जैक वेरे जो डेवेस (कोच)
२०७५, २८ फाल्गुन मंगलवार १६:०९
खेल प्रत्यक्ष प्रशारण नहुने भएपछि अफगानिस्तानद्वारा जिम्बावे विरुद्धको सिरिज रद्ध
२०७५, २८ फाल्गुन मंगलवार १६:०६
कोहली ५० औं शतकको दौडमा, सचिनको कीर्तिमान भङ्ग होला ?